बेलायतका नेपाली नयाँ शक्तिमा प्रवेश « Khasokhas Follow @khasokhasmag
बेलायतका नेपाली नयाँ शक्तिमा प्रवेश
बेलायतमा रहेका कैयन नेपालीहरु एकैपटक नयाँ शक्ति पार्टी नेपालमा प्रवेश गरेका छन् । बेलायतको लण्डन नजिकै एल्डरसटमा आयोजित कार्यक्रममा बेलायतमा रहेका नेपालीहरु ठूलोसंख्यामा एकैपटक नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेका हुन् ।
पार्टी प्रवेश गर्नेहरुलाई नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्राई, प्रवास समिति संयोजक नवराज सुवेदी, सहसंयोजक शंकर भण्डारी, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज बेलायतका संयोजक भोला खनाल, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज बेलायतका नेता धन गुरुङ, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका नेता मदन राई, कमला गुरुङ लगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो ।
नवप्रवेशीहरुलाई डा. बाबुराम भट्टराईले गुलावको फूल दिएर स्वागत गर्नुभएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज बेलायतको आयोजनामा गरिएको अन्तरकृया कार्यक्रममा उनीहरु नयाँ शक्ति नेपालमा प्रवेश गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज बेलायतका संयोजक भोला खनालले भन्नुभयो – ‘बेलायतमा नयाँ शक्ति पार्टीमा प्रवेशको लहर नै चलेको छ । नयाँ शक्ति पार्टी अहिले बेलायतमा नम्बर वान अवस्थामा पुगिसकेको छ । अब बेलायतमा नयाँ शक्ति पहिलो शक्ति बनिसक्यो ।’
बेलायतका नेपाली नयाँ शक्ति पार्टी प्रवेशका केही झलक